Dhalinyarada magaalada Bristol, ayaa xalay kulan casho ah u sameeyay Badhasaabka gobolka Gabiley, Mustafe Cabdi ciise ” Shiine “ | Salaan Media
Home Community Dhalinyarada magaalada Bristol, ayaa xalay kulan casho ah u sameeyay Badhasaabka gobolka...
Dhalinyarada magaalada Bristol, ayaa xalay kulan casho ah u sameeyay Badhasaabka gobolka Gabiley, Mustafe Cabdi ciise ” Shiine “
Casho sharaftaasi oo ay soo abaabuleen dhalinyaro ay saaxiibo aheeyeen gydoomiye Shiine waxa kala soo qaybgalay wasiir ku xigeenka Gaashaanshiga JSL iyo Xeerilaalyaha guud ee qaranka JSL.
Sidoo kale waxa Kulankaasi kala soo qaybgalay gabadha ah mudane ka tirsan golaha deegaanka Bristol Councillor Hibaq Jama iyo dhalin kale oo ka socotay barbaarta Table 7 ee galbeedka London, kuwaasi oo ay ka mid ahaayeen Cabdi Axmed Carabiner, Meecaad Cali Meecaad, Xamse.Baaxad iyo.Bare Shabeel.
Wasiirxigeenka Gaashaanshiga Mudane Cabdi dheere oo goobta as I ka hadlay ayaa u soo jeediyay mahadcelin iyo bogaadin dhalintii soo abaabushay kulanka isagoo ku booriyay in ay dhalinta Mar kasta ka fikirto sidii ay dalkoodii wax ula qaban lahaa teen.
Dhinaca kale waxa Mustafe Shiine uu ku guubaabiyay dhalinyaradii kulanka joogtay inay wax la qabsadaan dalka iyo dadka ay la nool yihiin oo ay wax la wadaagaan si ay marka danbe wax uga taraan qaranimada JSL, isagoo xildhibaanad Hibaqna ku amaanay geesinimada iyo dedaalla ay la timid,
Waxana uu reer Bristol gaar ahaan jaaliyada Somaliland ka dalbaday inay taageeraan oo ay u codeeyaan si ay uga gaadho mustaqbalka siyaasada UK meel sare.
Xildhibaanada oo iyaduna goobta ka hadashay ayaa ka warantay in golaheedu uu diyaarinaayo in Somalilamd kala shaqeeyo sidii dhalinyarada waxbaratay ay dalkii wax ugu Celin lahaayeen, iyaguna ay ugu yaraan wax uga soo korodhsan lahaayeen.